Heerka cusub ee khadka looxa "Himilicon" wuxuu keenaa isku-xirka WIFI oo aan kala go 'lahayn.
Muuqaalkan WiFi ee kamaradahani waxay ku saabsan tahay 30m, oo kuu oggolaanaya inaad dhigto kamaraddaada.
Xaqiijinta Video: True HD 1280x720P, keena fiidiyowga sare ee muuqaalka iyo tayada sawirka
Qalabka lagu rakibo 10,000 mAh lithium: Diiwaangalin joogto ah ilaa daqiiqo 900.
Muraayado yar yar iyo mugga, si aad si sahlan u qarin karto iyada oo aan la ogaan. Xafiis, safar, dukaamo, guryo ammaan ah oo loogu talagalay isticmaalo kala duwan (caruur, xayawaan rabaayad ah, caruur ilaaliye, dadka waayeelka ah).
Badeecada waxaa lagu qalabeeyaa 2.0 interface-speed-speed charging interface, oo ku xawaarida dhaqso, waqti gaaban waqti gaaban.
Iyada oo loo marayo awoodda mobilka, ku xir kharashka.
Talooyin diirran: Sababtoo ah tani waa kamarad baaskiil, fadlan haku laabin fiilaha iyo ilaalin.
Ku xir Koobka Koobaad: Ku saabsan aragtida fiidiyowga waqtiga-dhabta ah, waxay leedahay siyaabo 2 ah: mid waa Habboonaha Maxaliga ah ee ku xiran WIFI. mid kale waa aragti fog oo fog.
Xakamaynta hawlgalka fudud ee APP, xakamaynta fudud, fududeyn in la isticmaalo.
Xaqiijinta Video: True HD 1280x720P, keena fiidiyowga sare ee muuqaalka iyo tayada sawirka.
Taageerada 32GB Lacagta TF ee Max (Kuma jiraan)
Xalinta Video: True HD 1280x720P,
Diiwaan gelinta fiidiyowga ee joogtada ah A.villa 900 daqiiqo.
4604 Wadarta Views 11 Views Maanta